Ixesha kunye nabahlobo 7
Xa ethetha ngemicimbi yobugqi kunye nemimoya, umhlobo uyabuza: Ngaba kunokwenzeka ukuba umntu abone kwixesha elizayo?
Ewe. Inokwenzeka. Ixesha lahlulwe lidlulileyo, langoku nelizayo. Sijonga kwixesha elidlulileyo, xa sikhumbula into ngokubona ngamehlo engqondo okwenzekileyo. Oku ukubona kwixesha elidlulileyo wonke umntu unokukwenza, kodwa ayinguye wonke umntu onokubona kwikamva, kuba bambalwa abasebenzisa ulwazi lwexesha elidlulileyo ngokuqonda ukubona kwikamva. Ukuba umntu uthathe zonke izinto kunye neebheringi zesiganeko esadlulayo ethathela ingqalelo ulwazi lwakhe luya kumenza akwazi ukuqikelela iziganeko ezithile zexesha elizayo, kuba nangona ikamva likwahlulwa kwexesha okwangoku akukabikho, inyani, izenzo zangaphambili zidala , Ifashoni, ukumisela, ukunciphisa umda kwikamva, kwaye ke, ukuba umntu uyakwazi, njengesipili, ukubonisa ulwazi lwexesha elidlulileyo, unokuxela kwangaphambili iziganeko ezizayo.
Inokwenzeka, kwaye abaninzi bayenzile. Ukwenza oku usebenzisa into ebizwa ngokuba yi-clairvoyance, ukubona ngokucacileyo, okanye umbono wesibini. Ukubona ngokucacileyo, iseti yesibini yamandla okanye imo yangaphakathi yokubona iyasetyenziswa. Iliso linokusetyenziswa, nangona kungabalulekanga kwi-clairvoyance, ngenxa yecandelo elisebenza ngombono wokubona linokudlulisa isenzo salo ukusuka kwelinye iliso liye kwelinye ilungu okanye inxalenye yomzimba. Izinto zinokubonwa, umzekelo, kwiingcebiso zeminwe okanye i-plexus yelanga. Apho i-clairvoyant ijonge kwinto esiyibiza ngokuba zizinto ezikude esele zigqithile okanye kwiziganeko eziza kubakho, ilungu lomzimba apho oku kwenziwa liqhele ukakayi ngaphezulu nje kwamashiya. Apho njengakwisikrini se-panoramic indawo okanye into ebonakalayo edla ngokubonakala ngokucacileyo ngokungathi i-clairvoyant ikuloo ndawo kanye. Yonke into eyimfuneko ukuze unxibelelane ngokubonakalayo, sisakhono sokuthetha.
Ukubona okunjalo akukho kumava abo bonke. Kungenxa yamava abanye. Uninzi lwabo bangakhange babenamava bayabuthandabuza ubungqina babo banabo. Ayiphikisani nemithetho yendalo, kuba iyindalo, kwaye inokwenzeka kwabo i-linga sharira, umzimba we-astral, engadibananga kakhulu kwiiseli zayo zomzimba. Makhe siqwalasele izinto esizibonayo, kwaye sizibona njani ezo zinto. Umbono ngokwawo uyimfihlakalo, kodwa izinto ezichaphazela umbono asizithathi njengeziyimfihlakalo. Ke, sinamehlo enyama esijonga ngayo emoyeni kwaye apho sibona izinto ezibonakalayo. Sicinga ukuba oku kuyindalo, kwaye ke kunjalo. Makhe siqwalasele izikumkani ezahlukeneyo apho sinokubona khona. Masithi besisemhlabeni njengempethu okanye izinambuzane; kufanele ukuba sibe nengqiqo yokubona, kodwa amandla ethu anokulinganiselwa. Amalungu esiwaziyo ngamehlo awanakusetyenziselwa ukubona umgama omde, kwaye ukubona ngokwasemzimbeni kuya kuncitshiswa kwizithuba ezimfutshane kakhulu. Phambili kwinqanaba elinye kwaye masicinge ukuba sasiyintlanzi. Umgama apho besinokubona khona emanzini uya kuba mkhulu kakhulu kwaye amehlo aya kulungelelaniswa nokubhalisa ukungcangcazela kokukhanya okuza emanzini. Njengeentlanzi, nangona kunjalo, masikhanyele ukubonwa kwayo nayiphi na enye indlela ngaphandle kwamanzi okanye, enyanisweni, ukuba kukho into efana nomoya. Ukuba i-perchance sikhuphe iimpumlo zethu ngaphandle saze sabeka amehlo ethu ngaphezulu kwamanzi sangena emoyeni ke ngekhe sikwazi ukuphefumla, kwaye namehlo ngekhe abe nakho ukunceda kuba aphume kwinto yawo. Njengezilwanyana okanye abantu sikwinqanaba elinye phambi kweentlanzi. Sibona ngumoya wethu kwaye siyakwazi ukubona izinto ngamehlo kwindawo ekude kakhulu kunasemanzini. Kodwa siyazi ukuba iatmosfera yethu, ityebile kwaye imdaka, iyasithintela ukubona kwethu. Wonke umntu uyazi ukuba kwimeko yeChicago, eCleveland nasePittsburg izinto zinokubonwa kumgama weemayile ezimbalwa kuphela. Kwizixeko apho konke kucace gca, umntu unokubona amashumi amathathu okanye amashumi amane eemayile, kodwa ukusuka kwiintaba zaseArizona naseColorado imigama engamakhulu amawaka eemayile inokugqunywa, kwaye konke oku ngamehlo enyama. Kanye njengokuba umntu enokubona kucace ngokunyuka aye kwimihlaba ecace gca, ngokufanayo umntu unokubona ngokucacileyo ngokunyuka aye kwenye into ephezulu kunomoya. Into esetyenziswa yi-clairvoyant ukubona kuyo yi-ether. Kumntu obona ngokucacileyo kwi-ether uluvo lwethu lomgama luphulukana nexabiso lalo nanjengoko ingcinga yomgama wombungu okanye wentlanzi ingaphulukana nentsingiselo yayo kumhlali kwindawo eziphakamileyo, iliso lakhe elibukhali elinokubona izinto ezingabonakaliyo kwabo bahlala kwimigca esezantsi emathafeni.
Naliphi na ilungu emzimbeni linokusetyenziselwa iinjongo ezicacileyo, kodwa loo malungu okanye amalungu omzimba asetyenziswa ngokwemvelo okanye ngengqondo asetyenziswa yi-clairvoyant liziko elibonakalayo kwi-cortex yengqondo, iisono zangaphambili, i-optic thalami, kunye umzimba wepituitary. Izinto ezibonakalayo ezikufuphi ziboniswa ngamaza omoya osesibhakabhakeni, aguqula amaza okukhanya okanye ukungcangcazela kwimbilini yomthambo. Ezi nyikima ziqhutywa ecaleni kwendlela yokukhanya. Ezinye zezi zinto zidluliselwa kwi-optic thalami, ngelixa ezinye ziphoswa kwi-cortex yengqondo. Oku kuboniswa kwi-sinus yangaphambili, eyigalari yemifanekiso yengqondo. Umzimba wepituitary lilungu apho i-ego ibona khona le mifanekiso. Azisekho ngokwasemzimbeni xa zikhona zibonwa, kodwa kunoko imifanekiso ye-astral yomzimba. Zizinto ezibonakalayo ezibonakalayo kwilizwe le-astral le-ego, ukubona ukuba zeziphi ezona zinto zingcangcazelisayo zezinto ezibonakalayo eziphakanyiselwe kwinqanaba eliphezulu lokungcangcazela. Umbono kabani ungadluliselwa ususwe ngokwasemzimbeni uye kwilizwe le-astral ngeendlela ezininzi. Eyona nto ibonakalayo kukujonga kweliso. Ilizwe le-etheric okanye le-astral liyangena, lingene, kwaye lidlule ngaphaya kwehlabathi lethu elibonakalayo. Iliso elibonakalayo lenziwe ngendlela yokuba libhalise kuphela ukungcangcazela okuvela kwilizwe elibonakalayo njengoko kucotha xa kuthelekiswa ne-etheric okanye i-astral world. Iliso elibonakalayo alinakufumana okanye libhalise ukungcangcazela kwe-etheric ngaphandle kokuba liqeqeshiwe okanye ngaphandle kokuba umntu abe yinto ebonakalayo yendalo. Kuzo zombini iimeko kunokwenzeka ukuba umntu atshintshe ukugxila kweliso kwilizwe elibonakalayo aye kwilizwe le-etheric okanye le-astral. Xa oku kwenziwe, amalungu okanye amalungu omzimba ngaphambili akhankanyiweyo adibene ne-etheric world kwaye afumana ukungcangcazela okuvela kuyo. Njengoko umntu eyibona into yomnqweno wakhe ngokuguqula amehlo akhe kuloo nto, ngoko ke i-clairvoyant ibona into ekude ngokunqwenela okanye ukuyalelwa ukuba iyibone. Oku kunokubonakala kumangalisa kwabanye, kodwa ukumangalisa kuyaphela xa iinyani zisaziwa. Ngenkqubo yendalo egqibeleleyo lowo ubona kuphakama ngokucacileyo okanye ephakanyiselwe kwilizwe elicace ngakumbi lemigama emide, nanjengokuba umphambukeli wolwandle onzulu enokuphakanyiswa kumbono wakhe omncinci emanzini ukuya kumbono kwimozulu enenkungu, emva koko uye kwiindawo eziphakamileyo apho abona khona izinto kumgama omde ngakumbi. Lowo ufundile ukubona ngokucacileyo ngenkambo ende yokufunda kunye noqeqesho akufuneki alandele le ndlela. Kufuneka acinge ngendawo kuphela kwaye ayibone ukuba uyafuna. Uhlobo lwengcinga yakhe lumdibanisa neqhekeza le-ether elihambelana nengcinga, nanjengoko umntu ejikisa amehlo kwinto azakuyibona. Ukuqonda kwento ebonwayo kuxhomekeke kubukrelekrele bakhe. Umntu unokuhambisa umbono wakhe ususe kwinto ebonakalayo ebonakalayo iye kwinto engaziwayo kwaye aqonde into ayibonayo ngumthetho wokufanisa.
I-clairvoyant ayisiyiyo i-occultist, kwaye nangona i-occultist inokuba yi-clairvoyant, akunyanzelekanga ukuba ibe njalo. I-occultist ngumntu onolwazi ngemithetho yendalo, ophila ngokuhambelana nale mithetho, kwaye okhokelwa ngaphakathi ngobukrelekrele obuphezulu. Oosiyazi bahluka ngokwazi namandla ngokomsebenzi nanjengoko umsebenzi eyahluka ngokuqonda kunye nokukwazi kwinjineli okanye isayensi yeenkwenkwezi. Omnye unokuba ngumlingo ngaphandle kokuba aphuhlise i-clairvoyance, kodwa umlumbi ophuhlise le khono uyisebenzisa kuphela xa ejongene nezifundo zehlabathi le-astral. Akayisebenzisi ukuzonwabisa okanye ukuzanelisa iinjongo zakhe okanye zomnye. Akunyanzelekanga ukuba umntu osebenzelana nemimoya asebenzise ubuchwephesha obuchazayo ukuba abone ngekamva, nangona enokwenza njalo, ukuba unqwenela, ngokubamba ingcinga yakhe ngexesha elithile elizayo kwaye azimisele ukubona nokwazi okwenzekayo ngelo xesha.
Umlingo oza kujonga kwikamva kwaye azuze ngokobuqu kulwazi lwakhe angayeka ukuba ngumlingo ngokwenyani. Umsebenzi wobugqi kufuneka asebenze ngokuvisisana nomthetho wendalo kwaye angaphikisani nendalo. Indalo iyakwalela ukuxhamla komntu omnye kwingozi yonke. Ukuba umntu osebenzelana nemimoya, okanye nabani na osebenza ngamandla aphezulu kunalawo aqhelekileyo, usebenzisa loo magunya ngokuchasene nabanye okanye ngenxa yenzuzo yakhe ngokuchasene nomthetho ekufuneka esebenze nawo, hayi ngokuchasene nawo, ke ngoko uya kuba ngumkreqi kwindalo kunye nokuzingca okanye kungenjalo uphulukana namandla akhe awaphuhlisileyo; Kuzo zombini iimeko uyayeka ukuba ngumlingo ngokwenyani. Umlumbi unelungelo kuphela kwinto ayidingayo njengomntu kunye nomsebenzi wakhe, kwaye imvakalelo yokuzingca okanye ukuthanda inzuzo kunokumfamekisa emthethweni. Imfanyekiswe kakhulu, emva koko akanakukwazi ukuqonda nokuqonda imithetho elawula nokulawula ubomi, edlula ngaphaya kokufa, kwaye enxulumene kwaye ibopha zonke izinto ngokudibeneyo ukuze zilunge kubo bonke.
Yintoni 'iliso lesithathu' kwaye liyasebenza kwaye liligcisa?
"Iliso lesithathu" ekubhekiselwe kulo kwezinye iincwadi, ngakumbi "Imfundiso Efihlakeleyo," lelo lungu lincinci likwintloko entloko abathi iingcali zomzimba balibiza ngokuba lidlala lepineal. I-clairvoyant ayisebenzisi eli liso lesithathu okanye i-pineal gland ukubona izinto ezikude okanye ukujonga kwikamva, nangona abanye abantu abaphila ubomi obucocekileyo nabasulungekileyo benokuthi ngeli xesha lesithathu bavule iliso labo. Xa oku kusenzeka amava abo ahluke kakhulu kunangaphambili. I-occultist ayiqhelekanga ukusebenzisa i-pineal gland. Akunyanzelekanga ukuba usebenzise i-pineal gland okanye iliso lesithathu ukubona kwikamva, kuba ikamva lelinye lala macandelo mathathu exesha, kwaye amalungu ngaphandle kwe-pineal gland asetyenziselwa ukujonga elidlulileyo, ukubona okwangoku, okanye Ukujonga kwikamva. Ipineal gland okanye iliso lesithathu lingaphezulu kwesahlulo sexesha nje, nangona libaqonda bonke. Inento yokwenza unaphakade.
Ngumntu ophucukileyo kakhulu, umntu osebenzelana nemimoya okanye inkosi, onokuthi asebenzise "iliso lesithathu" okanye ipineal gland ngokuthanda, nangona uninzi lwabangcwele, okanye amadoda athe aphila ubomi bokungazingci aneminqweno ephakanyisiweyo, abone ukuvulwa kwe "Iliso" ngamaxesha okuphakama kwabo okuphezulu. Oku kunokwenziwa ngale ndlela yendalo, njengokukhanya ngamaxesha anqabileyo obomi babo nanjengomvuzo, isiqhamo seengcinga zabo kunye nezenzo zabo. Kodwa amadoda anjalo akakwazanga ukuvula iliso ngokwabo, kuba abaqeqeshwanga, okanye ngenxa yokuba bengakwazanga ukugcina ikhosi ende eqhubekayo yoqeqesho lomzimba nengqondo eyimfuneko ekufikeleleni. Umntu osebenzelana nemimoya, eyazi imithetho yomzimba, kunye nemithetho elawula ingqondo, kwaye ngokuphila ubomi obunyulu ngokuziphatha, ekugqibeleni ufuna ukuba kusetyenziswe imisebenzi engasasebenziyo yomzimba namandla engqondo, kwaye ekugqibeleni uyakwazi ukuvula " iliso lesithathu, ”idlala lepineal, ngentando yakhe. Injongo yokusetyenziswa kwepineal gland okanye "iliso lesithathu" kukubona ubudlelwane njengoko bukhona phakathi kwazo zonke izinto, ukubona okwenyani ngokungekho ngqiqweni, ukuqonda inyani, kunye nokuqonda nokuba yinto enye engenasiphelo.
Ngumlingo kuphela ophakamileyo onokuphendula lo mbuzo ngokuqinisekileyo. Ngaphandle kokwenza ngathi lolona lwazi lwaneleyo, sinokufumana inzuzo, nangona kunjalo, siqikelele malunga nokulindela indlela oku kufezekiswa ngayo, kunye nesiphumo. Umntu ophila ubomi obuqhelekileyo behlabathi akanako ukuvula okanye ukusebenzisa "iliso lakhe lesithathu". Eli lungu lomzimba liyibhulorho phakathi komzimba nengqondo. Amandla kunye nobukrelekrele obusebenza ngayo ibhulorho phakathi kwesiphelo kunye nokungapheliyo. Lowo uhlala esiphelweni ucinga ngokupheliswa kwaye asebenze esiphelweni akanakukhula aye ekuqondeni okungapheliyo ngelixa yena ephila kwaye ecinga kwaye esenza. Inyathelo lokuqala eliza kuthathwa ekuvuleni "iliso lesithathu" kukulawula iingcinga, ukucoca ingqondo, kunye nokwenza umzimba ucoceke. Oku kubetha kwiingcambu zobomi, kwaye kugubungela lonke uluhlu lophuhliso lomntu. Yonke imisebenzi kufuneka yenziwe ngokuthembekileyo, zonke izibophelelo mazifezekiswe ngokungqongqo, kwaye ubomi kufuneka bukhokelwe yimvakalelo kabani yobulungisa. Umntu kufuneka atshintshe imikhwa yokucinga kwizinto ezisezantsi azithathele ingqalelo izinto eziphezulu zobomi, ukusukela apho ephezulu. Yonke imikhosi yomzimba kufuneka inyuselwe phezulu ngengcinga. Lonke ulwalamano emtshatweni kufuneka luphelile. Umntu ophilayo uya kubangela ukuba amalungu omzimba akade engasasetyenziswa asebenze kwaye avuswe. Umzimba uyakonwaba ngobomi obutsha, kwaye obu bomi butsha buza kuphakama buye moya buye moya emzimbeni de zonke izinto ezintle zomzimba zithwale amandla ziye entloko kwaye ekugqibeleni, nokuba zizezazo ngokwendalo, okanye ngomzamo intando, intyatyambo yanaphakade iya kutyatyamba: Iliso likaThixo, "iliso lesithathu," liya kuvulwa. Ukuqaqamba kwelanga eliwaka akufuneki kuthelekiswe nokukhanya kwenyaniso okuthi emva koko kugcwalise kujikeleze umzimba kwaye kungene kuwo wonke umhlaba. Izinto, njengezinto, ziyanyamalala kwaye zisonjululwe kumgaqo abazimeleyo; kwaye yonke imigaqo emele eyokwenyani isonjululwe kubukhulu bayo yonke. Ixesha liyanyamalala. Unaphakade uhlala ukho. Ubuntu balahlekile kubuntu. Ubuntu abulahlekanga, kodwa buyanda buye bube yinto yonke.